चीनका ७२ प्रतिशत जनसंख्याले लगाए कोरोना विरूद्धको खोप
१ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०८:४६
एजेन्सी । चीनले झन्डै ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई कोरोनाभाइरसविरूद्धको पूर्ण खोप लगाइसकेको बताएको छ।
बिहीबार चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले सेप्टेम्बर १५ सम्म २ अर्ब १६ करोड डोज भ्याक्सिन लगाइसकेको जानकारी दिएको छ। चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अहिलेसम्म १ अर्ब ४० करोड चिनियाँमध्ये अहिलेसम्म १ अर्बले पूर्ण खोप लगाइसकेका छन्। विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको चीनले खोप अभियानलाई पनि तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको छ। चीनले आफूले उत्पादन गरेको खोपमात्रै आफ्ना नागरिकलाई दिएको छ।
चीनले खोप लगाएकामध्ये २० करोड मानिस ६० वर्ष माथिका छन् भने ९ करोड ५० लाख जना १२ देखि १७ वर्षका बालबालिका छन्। चीनपछि संसारमै बढी नागरिकलाई खोप लगाउनेमा मुलुक भारत हो। भारतमा अहिलेसम्म ७५ करोड मानिसले खोप लगाएका छन्। चीनले आक्रामक तरिकाले खोप अभियान चलाए पनि कोरोनाभाइरसको नियन्त्रण पूर्ण रूपमा गर्न सकेको छैन। बेला(बेलामा त्यहाँ कोरोनाका संक्रमित भेटिने गरेका छन्।
पछिल्लो समय दक्षिण पूर्वी प्रान्त फुजियानमा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्ला ६ दिनमा त्यहाँ २ सय बढी संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमण भेटिएका ठाउँमा चिनियाँ अधिकारीहरूले स्वास्थ्यका कडा मापदण्ड लागु गर्ने गरेका छन्।
सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो, अर्घाखाँची-काठमाण्डौ कती लाग्छ ?
३ जेष्ठ २०७९, मंगलवार २२:३८
अर्घाखाँचीको ४ स्थानीयतहमा मतगणना सकियो
३ जेष्ठ २०७९, मंगलवार २१:५५
अर्घाखाँचीको ताजा मतपरिणाम (मतगणना जारी)
३ जेष्ठ २०७९, मंगलवार २०:२९
भुमिकास्थानको मेयरमा जनमोर्चाका झवी थापा निर्वाचित
३ जेष्ठ २०७९, मंगलवार २०:१४
अर्घाखाँचीमा कांग्रेस कमजोर
३ जेष्ठ २०७९, मंगलवार १९:२१
कांग्रेसका उच्च नेताहरु वडामै असफल
३ जेष्ठ २०७९, मंगलवार १४:३९
अर्घाखाँचीमा गठबन्धनको बिजोक
श्रीपेच मिडिया प्रा.ली द्वारा संचालित
दर्ता न‌ं. २८३७८५/०७८/०७९
Copyright © 2021 अर्घाखाँची पोष्ट सर्वाधिकार सुरक्षित
Create & Design By :